मन्त्रीहरुको कामको अनुगमन डिजिटल प्रविधिबाट, मोबाइल एप बन्न बाँकी – Nirantarkhabar
पोर्टलमा कसरी हुन्छ काम ?
प्रत्येक मन्त्रालयले कुन महिनामा के गर्ने भनेका थिए ? गर्ने भनेको काम के भयो ? भन्ने जस्ता विवरणहरु पोर्टलमा प्रस्टै देख्न सकिने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल बताउनुहुन्छ ।
मोबाइल एप बन्नै बाँकी
सबै मन्त्रालयमा पोर्टल जडानको काम सकिएको र मोबाइल एप डेभलप गर्ने काम भने भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरुलाई पोर्टलमा विवरण भर्ने बारेमा जानकारी गराउने काम अहिले सकिएको भन्दै उहाँले अब मोबाइल एप बनाउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयहरुले पोर्टलमा भरेका विवरण अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सम्बन्धित शाखाका अधिकृत बाहेक अन्यले हेर्न नमिल्ने गरी राखिएको छ । अहिले परीक्षणकै क्रममा रहेकाले यसको पूर्ण प्रयोग केही दिनपछि सुरु हुने प्रवक्ता कुँवरले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले कुन महिनामा के काम गर्ने भनेर पहिले नै बुझाएका प्रतिबद्धता अनुसार काम भए नभएको पोर्टलमा हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्रालयको प्रगति विवरण राख्ने काम डिजिटल रुपमा सुरु भएपछि कागजी रुपमा तयार पार्नुपर्ने झण्झटबाट पनि अब मन्त्रालय मुक्त हुने भएको छ ।
समीक्षा अझै भएको छैन
मन्त्रालयले अहिले पोर्टलमा आ–आफ्ना प्रगति विवरण राखिरहेका छन् । प्रगति विवरण राख्ने काम कस्तो भइरहेको छ ? यसले सहजता ल्यायो कि ल्याएन भनेर मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल भने हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुनु भएकाले ढिलाई भएको र अब छिट्टै समीक्षा बैठक बस्ने प्रवक्ता कुँवर बताउनुहुन्छ ।
सकेसम्म तिहार अघि र नभए अर्को महिना बैठक बस्ने कुँवरले बताउनुभयो । ‘अर्को महिना आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो चौमासिक पनि पुग्ने भएकाले चौमासको प्रगति विवरण के कति भयो भनेर सामूहिक बैठक बस्ने कि भन्ने पनि हामी अनौपचारिक सल्लाहमा छौं, उहाँले भन्नुभयो ।’ अहिले नै समय तय भैनसकेको भन्दै उहाँले सकेसम्म तिहारपछि नभए अर्को महिनामा समीक्षा बैठक बस्ने बताउनुभयो